"Akụkọ nke ”wa" (2020): Tom Hanks - pisklak.net
“Akụkọ nke ”wa” (2020): Tom Hanks
Tom Hanks bụ akụ na-eme ihe. Ọ dị ịma nso ihe ncheta. Ma ọ bụ ezie na ọ dị ogologo site na ịme nnukwu mkpọtụ mbụ ya na 1984 rom-com “Splash”, ọ ka na-ewetara ya nke kachasị mma na ihe nkiri Old West ọhụụ “Akụkọ nke ”wa”.
Ndi Hanks a na-aga gburugburu na-ebi n’omume nke onye isi agha ndi agha na obi ojoo, Captain Jefferson Kyle Kidd. Kidd na-esite n’otu obodo gaa n’obodo gafee post-Civil War Texas na-agụ site n’akwụkwọ akụkọ kachasị ọhụrụ na ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike na-agbakọta ọnụ iji nụ nke kachasị ọhụrụ site na ebe ha nwere ike iche n’echiche site na nkọwa nkọwa dị egwu.
Ka ọ nọ na njem nanị ya site n’ime ime ọhịa dịpụrụ adịpụ Kidd bịakwutere otu nwatakịrị nwanyị, Johanna (Helena Zengel na ihe nkiri izizi pụtara ìhè. Lelee ya anya. Ebe nwa agbọghọ a nọ) Naanị naanị anyị na ụjọ, anyị bịara mụta na ọ nweghị ihe ọ bụla ma e wezụga ugboro ugboro na enweghị ike ịkọwapụta ออนไลน์ รี ย์ ออนไลน์ ọdachi maka afọ niile ọ dị nro. Ọnọdụ dị iche iche na-eso nke na-achọ ka Kidd duru ya, ma na-esokwu ya nso, nwa ya na ya gafere site na mpaghara obi ọjọọ na mgbaghara, n’oge niile na-alụ ọgụ ma na-echere mwakpo ọjọọ, nke mmadụ na nke okike.
Afọ ise ka ngwụcha nke Agha Obodo gasịrị, Capt. Jefferson Kyle Kidd na nwa agbọghọ dị afọ 10 nke ndị Kiowa weghaara. N’ịbụ onye a manyere ịlaghachikwuru nwanne nne ya na nna nna ya, Kidd kwetara iduga nwata ahụ gabiga ajọ ala na mgbaghara nke Texas. Kaosinadị, ogologo njem ahụ ga-abụrịrị ọgụ maka ịlanarị ka ndị ibe ha na-ezute ihe egwu n’akụkụ ọ bụla – ma mmadụ ma nke ebumpụta ụwa.